T@ taloha aho miazakazaka fôna isaky ny maraina. ... - Dinika forum.serasera.org
T@ taloha aho miazakazaka fôna isaky ny maraina. ...
Fitohizan'ny hafatra : T@ taloha aho miazakazaka fôna isaky ny maraina. ...
shannie - 17/07/2013 23:58
T@ taloha aho miazakazaka fôna isaky ny maraina. 6 taona lasa izay, rehefa niteraka aho dia nijanona. izao aho tia iverina izakazaka maraina indray, dia mba manontany aho oe, impiry isakerinandro no tena mety hanaovana azy dia adin'ny firy eo? merci!
5laody - 19/07/2013 08:55
Tsy maintsy atao tsimoramora tsikelikely angamba satria betsaka ny fiovan'ny organismenao hatramzay. Atomboy amin'ilay mandeha tongotra malaky mandritra ny 30 min dia ho hitanao ny rythme-nao. Ny frequence tsara rehefa tena mahazo rythme sy mahafantatra ny limite-nao ianao dia 2 na 3 isan-kerinandro (mihoatra an'izay amiko efa addiction indray).
raha misy namana na ramose miaraka manomboka no tena mety.